Baakadaha caaga ah, Weelka Aluminium, Samee Tube - HEYPACK
Xirxirida caag ah
PET dhalo afuufa
kiciya dhalada lagu buufiyo
Dhalada bamka ee PET
Dhalada PET leh dabool
Shampo & Dhalada daryeelka jirka
dhalada shaambo & dhalada
ilmaha & mon
Tuubo wax lagu qurxiyo
tuubo caag ah
tuubada dahaarka leh
tuubada leh qalabka wax lagu dhejiyo
Dhalo aan hawo lahayn & Caag kareemka loo yaqaan 'Acrylic Cream'
Weel caag ah & Cirbadda Qurxinta
PET / PP / PE weel
siriinj dhiig ah
Dibnaha dhalaalaya bushimaha
Waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay oo diiradda saareysa wax soo saarka iyo iibinta dhammaan noocyada xirmooyinka iyo konteenarada. 15-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan u fidinay adeeg xirmo shirkado badan iyo kuwa badan. Waxaan u heellan nahay hagaajinta heerka naqshadeynta ganacsigeenna.
Waxaan ku riyoonaynaa inaan noqono badeecad caalami ah oo wax soo saarta, waxaanna u adeegnaa 10000 nooc oo adduunka oo dhan ah. Waxaan haynaa naqshad wax soo saar oo adag oo madaxbannaan, kooxaha horumarinta wax soo saarka.
Baakadaha & Weelka
Tan iyo 2003
Dhalo, Tubbo, Jar
Dhalada Hdpe / PP
Qubeyska & Timaha
Aluminium / Tube caag ah
Duub Dhalo / Udgoon Dhalo
Mashiinka Mashiinka / Buufin
Caafimaadka & Reerka
Oo ay ku jiraan waxyaabo cusub oo diyaarinaya ,. Dhalada midab sameynta sameysa, Dhalo afuufid & Cirbadeyn. Dusha sare looga tuuro sida elektaroonigga, daryeelka maqaarka. Naqshad daabacan sida calaamadeynta, Daabacaadda Ofiset, Daabacaadda shaashadda, Dahabka / Lacagta / Dahabka Rose iwm.
BILAASH xirxirida 2003
Raritaanka Dusha & Daabacaadda
1-4 midabada daabacaadda shaashadda, ku habboon macluumaadka sheyga, log fudud
Lacag, Dahab, Dahab Dahab ah, Suudhadh kulul oo kulul oo loogu talagalay astaanta
Midab cad, hufan, midab midabaysan leh oo dhir ah, qof.
Matte madow, midab cad, ama midab kale oo tayo sare leh
Dhalo leh daabacaadda calaamadda
Dhalo midab kala duwan leh
Dhalada buufin-nus-hufan ah
dhalada buufinta balaastiga ah
Dhalada serume ee wajiga
Romm 1606, Block A, Shuguang international Building No. 300 Shangcheng Avenue, Futian Street, Yiwu City, Gobolka Zhejiang.